Mid ka mid ah khasnadihii Louvre: Guushii Garabka Garabka Samothrace | Abuurista khadka tooska ah
El Louvre waa mid ka mid ah matxafyada ugu caansan adduunka oo yaa ku yaal mid ka mid ah uruurinta farshaxanka ee cajiibka ah. Waxaan ka hadleynaa matxaf aad marinkiisa ku arki karto Mona Lisa iyo galab dhan ee Michelangelo.
Adigoon ilaawin Venus de Milo iyo farshaxan gaar ah hal faahfaahin ah: guushii baalasha ahayd ee Samothrace. Xaqiiqda ah in mid ka mid ah gacmihiisa la la'yahay. Waa mid ka mid ah mucjisooyinka waaweyn ee ay leedahay 'Louvre' oo aan inbadan oo ka mid ahi aqoon taariikhdeeda.
Guusha baalasha leh ee Samothrace asalkeeda lama oga, in kasta oo sida uu qabo Louvre ay tahay gabal waxaa xardhay dadka reer Rhodes, jasiirad Griig ah, bilowgii qarnigii XNUMXaad ee dhalashadii Ciise ka hor. Waxaa loo abuuri lahaa si hufan xilligan ugu muhiimsan xilligii Hellenistic-ga.
Este dhaqdhaqaaq faneed hore ayaa dib loo keenay xagga hore ee farshaxankiisa muujinta ah ee mawduucyada mala awaalka ah ee dhaqdhaqaaqa. Farshaxanku wuxuu u taagan yahay ilaahgii Giriigga ee guusha, Nike.
Guusha Garabka Garabka Samothrace ayaa la rumeysan yahay in loo abuuray xus xusuustii guusha dagaalkii badda. Gaar ahaan cagahaas horay u socda iyo taallo u gaar ah dartiis. Taallo ahayd mid ka mid ah goballadii marmarka ee qurxisay Naxariista Eebbe Weyn ee Samothrace. Waxaana loo hibeeyay diin qarsoodi ah, ama cibaado qarsoodi ah, oo ah Hooyada Weyn.
Waxaa daahfuray diblomaasiga Faransiiska ah iyo taariikh nololeedkii Charles Campoiseau Abril 1863. Intii uu awoodaa inuu soo celiyo 23kii baloog ee markabku ka koobnaa, shaxanka waxaa loo qaaday magaalada Paris maadaama uu ka helay 3-da qaybood.
Waxyaabaha qosolka badan ayaa ah at 90 Ka dib markii la ogaaday, khubaro cilmi-baareyaal ah oo ka socda Austria ayaa helay qaybo ka maqan, oo ay ku jirto gacantiisa midig, in kasta oo bidixdu weligeed aan lagu aqoon inay sii jirto sida aan maanta u naqaan.
Waxaan kuu daynay farshaxanno macquul ah farshaxanyahankan casriga ah ee sida xaqiiqada ah kaa yaabin doona.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Farshaxan gacmeedka Louvre